Izizathu eziyi-19 zokuthi kungani iLabradoodle Iyona Doodle Engcono Kakhulu - Izinhlobo
Izizathu eziyi-19 zokuthi kungani iLabradoodle Iyona Doodle Engcono Kakhulu
Uhlobo lweLabradoodle luyinja yomklami eyaqala ukukhuliswa ngokukhwelana iPoodle esezingeni elilinganiselwe neLabrador Retriever.
Ngaphandle kokungaziwa kwabo yiAmerican Kennel Club, baba uhlobo olwandayo phakathi komphakathi we-canine.
AmaLabradoodles athandwa yizinkulungwane zemindeni ngoba kunjalo uhlobo olujabulisayo, olusebenzayo, olunobungane nolunenhliziyo efudumele abenza ukwengeza okuphelele.
Qhubeka ufunde ngezizathu zethu eziyi-17 eziphezulu zokuthi kungani le nja iluhlobo oluhle kakhulu lweDoodle.
19. ILabradoodles Yiyona Esika Kakhulu
18. Akwaziwa Ukuba Nolaka
17. Ziguquguquka Kakhulu
16. Futhi basebenza kanzima futhi
15. ILabradoodles Yenza Izilwane Ezifuywayo Ezinhle Zomndeni
14. AmaLabradoodles Ahamba Phambili Kuwo Womabili Amazwe
13. Badume Ngokuya Ngokuya
12. Imidlwane YaseLabradoodle Ishibhile Kunama-Goldendoodles
11. Ungasindisa Umuntu!
10. ILabradoodles Thanda Ukubhukuda
9. Benza Izinja Ezinkulu Zokwelapha
8. Baphila Iminyaka Engafika Ku-15
7. ILabradoodle Ilula Kakhulu Ukuyiqeqesha
6. Babakhulu Ekudlaleni Imidlalo Yobuchopho
5. Bafika Ngamasayizi Amathathu Ahlukene
4. Ama-Labradoodles Ngukuzala Okuphansi
3. Bayakuthanda Ukuzijabulisa
2. Ama-Labradoodle Enza ama-Great Cuddle Buddies
1. Badlala kahle kakhulu
Yiliphi Iqiniso Lakho Olithandayo?!
Ukubukeka kweLabradoodle yakho kungahle kungalindelekile. Akunandaba ukuthi ngubuphi usayizi, ukuhluka noma umbala; into eyodwa okungavunyelwana ngayo ukubukeka kwabo okuhle!
Empeleni, bangazuza njengefa izici ezivela ohlangothini lomndeni wabo (iPoodle noma iLabrador). Imvamisa, ukubukeka kwabo kuchazwa njenge-teddy-bear efana.
Lokhu kungenxa yomzali wabo wePoodle. Abaningi Izinhlobo ezihlanganisiwe zePoodle zivame ukwaziwa nge-teddy-bear efana nokubukeka.
Ezinye izingxube ezidumile zifaka phakathi iShih Poo, iSaint Berdoodle, neCockapoo.
Hhayi uhlobo olwaziwa nganoma yikuphi ukuthambekela okunolaka; bayinja ehlakaniphile futhi eqaphelayo.
Lapho ukuhlangana nokuqeqeshwa kahle esemncane , iLabradoodle iyi-canine enobungane kakhulu.
Uhlobo olutholakala kalula, ukuntuleka kwabo kokuziphatha okunolaka kubenza babe uhlobo oluhle kakhulu oluzungeze izingane. Bayakwazi ukuhlala benesineke ngokweqile futhi benakekela.
Azenzi inja enkulu yokuqapha . Njengomzali wabo waseLabrador, banobungane futhi abaphendukeli ekuziphatheni okusabisayo.
Ukuguquguquka kahle kwale nja kungangena kahle ezimeni zokuphila ezahlukahlukene. Ama-Labradoodles aguquguquka kakhulu ngenxa yezizathu eziningi:
Ubuntu babo bokuhamba kalula
Ukwehluka kobukhulu bazo
Isimo sabo esifudumele
Inqobo nje uma izidingo zabo zokuzivocavoca zigcwaliseka, lapho-ke bangaphumelela ngisho nasekhaya elincane noma efulethini elingaphakathi nedolobha.
AmaLabradoodles azibonakalise eyinja esebenza kanzima kule minyaka edlule. Izindima zabo ezahlukahlukene zokusebenza zifaka:
Kunezici ezithile (isb. Ukwethembeka, ukulinganisela ukuya ezingeni eliphezulu lomsebenzi, ubuhlakani, nokukhuthazela) okwenza lolu hlobo lube yinja esebenzayo ngokuphelele. Zonke lezi zimfanelo zingasetshenziswa ukuchaza lokhu kuhlanganiswa komklami.
AmaLabradoodles ayachuma ngokuba nomsebenzi okufanele awenze , futhi ngithanda ukuhamba nawe lapho wenza umsebenzi wakho futhi.
Ngenxa yezidingo zabo eziphakeme ngokwengqondo nangokomzimba, bayihlobo elisebenzayo futhi bayathanda ukuba nomsebenzi. Le nhlanganisela isebenza kakhulu kune- amanye amamiksi we-doodle .
Baziwa ngokuthembeka okukhulu nothando kubanikazi babo nasemalungwini omndeni wabo.
Ngenxa yezinhlobonhlobo zosayizi ohlukile; kuneLabradoodle evumelana namakhaya amaningi ahlukene .
Mhlawumbe ungakhetha okuncane uma uphila impilo ematasa? Uma ufuna umngane osebenzayo ongangeza emndenini, mhlawumbe usayizi ojwayelekile ufaneleke kakhulu?
Ukuzivumelanisa nezimo kwabo okuphezulu kubenza babe yinja enkulu yomndeni ezinhlotsheni eziningi zemindeni.
Kubalulekile ukuqaphela, lolu hlobo aluhambisani kahle nalo ukusala yedwa isikhathi eside. Lokhu kungenxa yomzali wabo wePoodle, ongahle ahlupheke ngokuxhalaba kokwehlukana.
UHalf Poodle, nohhafu I-Labrador retriever , lokhu kuhlanganiswa kuhlanganisa izinhlobo ezimbili ezithandwa kakhulu eMelika ndawonye:
AmaLabrador Retrievers aziwa njengabantu abanothando, abanobumnene, nabathanda umndeni.
Ama-Poodle aziwa ngobuhlakani bawo, ubudlelwano bawo nezimpawu zawo zokuxwayisa.
Ngaphandle kwesimangalo iLabradoodle yokuqala yavela e-Australia ngo-1970, eyokuqala yavela eMelika eminyakeni emihlanu ngaphambili. Omunye ogama lakhe linguFang wayaziwa njenge-TV Star ohlelweni lwethelevishini i-Get Smart ngo-1965.
Azaziwa ngokusemthethweni yiAmerican Kennel Club, iLabradoodle iya ngokuya ithandwa ngaphesheya kwe-United States.
Ngenxa yezici zabo ezikhangayo nobumnene obuthandwa ngumndeni; bayanda abafuyi abaqhamukayo. Kubalulekile ukuthi usahlose ukuthola umfuyi onokwethenjelwa futhi onedumela.
Cishe ku- $ 1,500 kuya ku- $ 2,500 USD, intengo yomdlwane wakho incike kuzalanisi, abazali bomdlwane wakho, kanye nomlando wabo kadoti.
Kufanele futhi ulindele ukukhokha inani eliphakeme yezinguqulo ezenzelwe ukusetshenziswa okuncane zohlobo.
Izinhlobo ezenzelwe miniaturized kaningi kunzima ukuzithola ngenxa yezingozi ezibandakanyeka ekuhlanganiseni izinhlobo ezahlukahlukene zobukhulu.
Ngeshwa, kwesinye isikhathi kuba nokubi ekwandeni kokuthandwa kwabo, abaningi bagcina belahliwe nasezindaweni zokutakula.
Uma ungathanda ukwamukela kunokuba uthenge, khona-ke kunezinhlangano eziningi nezindawo zokukhosela e-United States ezinikezelwe ekubuyiseleni nasekuvuseleleni lolu hlobo!
Izinhlangano ezidumile zifaka:
IDOG Ukutakula Inc.
Ukutakulwa Kwe-Doodly Dandy
Ukwamukela inja yokutakula ephezulu kungaba yinto efudumele nenhliziyo ethokozisayo kwakho nobabili nomndeni wakho.
Bobabili abazali bale nja (iLabrador Retriever nePoodle), bayizinja zamanzi. Ikakhulu, iLabrador Retrievers UTHANDA ukubhukuda!
Ngenxa yokusondelana kwabazali babo namanzi, ILabradoodle nayo iyawathanda amanzi .
Uthando lwabo lokubhukuda lukunika izindlela eziningi zokubopha nokuxhumana nomdlwane wakho. Bangahle bathande nokukujoyina kulawo maziphu ashisayo ehlobo ntambama.
Ezinye izindawo ezinhle zokubhukuda ze-doodle yakho zifaka phakathi: imifula, amabhishi kanye nedamu lokubhukuda.
Sincoma, lapho kungenzeka khona, ukwethula umdlwane wakho ukubhukuda usemncane.
Ubuwazi ukuthi iLabradoodle yokuqala yazalwa ngenhloso yokusebenza njengenja eqondisayo kulabo abadinga uhlobo lwe-hypoallergenic?
Ngenxa yalokhu, aziwa njengokwelapha okuhle nezinja ezisebenzayo; bebezoba ngokwemvelo.
Banemvelo enothando, ehlakaniphile, neqondayo ebavumela ukuthi basebenze futhi bathuthukise ukuxhumana nabantu abaningi abahlukahlukene abangadinga usizo.
Empeleni, ocwaningweni lwakamuva kwafingqwa ukuthi ukutholakala kwezinja zokwelapha ezimweni zenhlalo kukhulisa izimpendulo ezijwayelekile zenhlalo yezingane ezine-autism.
Lokhu kusho ukuthi amaLabradoodles ayengabagqugquzeli bokusiza labo ababhekene nobunzima ukwakha ukuxhumana hhayi nabo kuphela, kodwa nezinye izinto ezingaphandle.
Zivame ukusetshenziswa futhi zikhuliselwe ukuba yinja yokwelapha e-United States nasemhlabeni wonke.
Eyaziwa ngokuba uhlobo oluphilile, enye yezinhloso zalolu hlobo lomklami kwakuwukunciphisa noma yiziphi izinkinga zezempilo zofuzo ezinhlobonhlobo ezithile ezingaba nazo.
Uma inja yakho ithandwa kahle futhi inakekelwa (isb. Umsoco, imvelo nokuzivocavoca umzimba), ngakho-ke banakho isilinganiso sobude besikhathi sokuphila seminyaka cishe eyi-12 kuye kwengu-15 ubudala ( leyo yiminyaka yabantu engama-93 ).
Kodwa-ke, kunezinto ezithile ezingaba khona zezempilo okungenzeka usadinga ukuthi wazi.
I-Hip ne-elbow dysplasia yizifo ezithinta amaLabrador Retrievers namaPoodles. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi lesi simo sempilo singathinta amazinyane abo.
Lokhu yi isifo semisipha lokho kwenzeka ngenxa yokungalungi kwesokhethi noma kwesokhethi. Ibhola nesokhethi lamajoyinti akulingani kahle futhi kuvame ukuhlikihla nokucasula umdlwane wakho lapho unyakaza.
I-dysplasia yesikhathi eside neyendololwane ingaholela ku-osteoarthritis uma ingalashwa kusenesikhathi.
Lesi sifo singavela ngenxa yemikhuba emibi yokuzalanisa, izimo zofuzo, noma ukungondleki kahle (okusho ukukhuluphala).
Yaziwa njengenye yezinhlobo zezinja ezinobuhlakani obedlula zonke, lokhu kuxubana kuhle ukuqeqeshwa! Lokhu kungenxa yezizathu ezimbili ezibalulekile:
Bobabili abazali bePoodle neLabrador Retriever bakuluhlu oluphezulu lwe-10 lohlobo lwezinja ezihlakaniphe kakhulu emhlabeni.
Bathanda ukujabulisa abanikazi babo. Le nja inkulu ngokujabulisa abantu; ngakho-ke ukukubona unelisekile futhi umomotheka, lapho sebenze iqhinga elithile, kuyabajabulisa.
Ngenxa yomzali wabo weLabrador Retriever, banguhlobo olugxile kakhulu ekudleni. Lokhu kusho ukuthi bazokwenzela noma yini ukudla futhi bakulungele ukugxila, bafunde, futhi baphumelele uma nje ukuphathwa kusesandleni sakho.
Njengenja ehlakaniphile, ILabradoodle ibamba izikhathi zokuqeqesha ngokushesha okukhulu futhi imvamisa ithatha imiyalo eyisisekelo efana nokuthi 'hlala, hlala phansi' zingakapheli izinsuku.
Isihluthulelo ukwenza ukuqeqeshwa kujabulise futhi kukhanye ukuqinisa okuhle izindlela (isb.sebenzisa imikhuba yokuqeqesha esekelwa kumvuzo).
Izinhlobo ezilula zokuqeqesha zivamise ukwenza izinja zomndeni ezinhle kakhulu ngoba azidingi abanikazi abanolwazi oluningi ukuqinisekisa ukuthi zikhula zibe yilungu le-canine elinemikhuba emihle.
Njengohlobo oluhlakaniphile nolusebenzayo, le ngxube yomklami iyathanda futhi ifisa ukuvuselelwa kwengqondo.
Umdlandla wengqondo unganikezwa umdlwane wakho ngezindlela eziningi ezahlukahlukene: ukuya epaki yezinja, imidlalo yokuhlanganyela, ukuhamba, ukugijima, nokushintsha kwemvelo (njengomfula noma ulwandle).
Ukukhuthaza ubuchopho bomdlwane wakho ngemvelo entsha nejabulisayo kuyindlela enhle yokuba wena nomndeni wakho nibambane. Kuyinto enhle ukukwazi ukuthatha isilwane sakho uye ezenzakalweni!
Uma behlangana futhi beqeqeshwa kahle kusukela besebancane, iLabradoodle isebenza kahle ngayo ukugqugquzela ingqondo futhi ingaphatha ushintsho ezindaweni kahle kakhulu.
Izikhathi zokuziqeqesha zingasetshenziswa futhi njengendlela yokukhuthaza ingqondo ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi iLabradoodle yakho izotshalwa kuzikhathi zabo zokuziqeqesha futhi ngeke ikwazi ukubhoreka kalula.
Le mix mix ingafika ngobukhulu obuhlukahlukene. Osayizi abakhulu bafaka: ithoyizi, okuncane, nokujwayelekile.
Usayizi wazo kuncike kumzali wabo wePoodle naye angafika ekukhetheni kwalawa masayizi amathathu.
Ithoyizi Amasentimitha ayi-14 kuye kwayi-17 ukuphakama
Okuncane Amasentimitha angu-17 kuya kwangu-20 ukuphakama
Okujwayelekile Amasentimitha angama-21 kuya kwangu-24
Isisindo seLabradoodle singaba kusuka kumakhilogremu ayi-15 kuye kwangama-65.
Usayizi wamathoyizi imvamisa uhlangothi olukhanyayo lwaleli banga, kanti ama-Standards asohlangothini olusindayo, kanti ama-Miniature awela ndawana thize phakathi.
Ngokwengeziwe, zinemibala ehlukahlukene, kufaka phakathi: omnyama, omhlophe, ukhilimu, ushokoledi, ibhilikosi, obomvu, igolide, isiliva, ompunga nokuphuzi.
Izindaba ezinhle zabaguliswa ukungezwani komzimba nezinja, lolu hlobo lubhekwa njengophansi kakhulu; ezinye zize zaziwe njenge- uhlobo lwe-hypoallergenic . Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi lapho ijazi lenja yakho lifana noboya obufana nobobo noma ukuthungwa.
Isihloko sabo se- 'hypoallergenic' akusona isithembiso ngenxa yezici zefa elingenakulindelwa. Ngakho-ke amazinga wokuchithwa kwengubo angahluka.
Abanye nakanjani bachitha ngaphezu kwabanye.
Uma umdlwane wakho uzuza njengejazi lePoodle khona-ke uboya babo kungenzeka bube bukhulu, futhi busonte. Ijazi likaPoodle nalo liyijazi elilodwa ngakho-ke alihlali njalo.
Uma umdlwane wakho uzuza njengejazi leLabrador Retriever khona-ke uboya babo bude, bukhulu futhi buqondile. Lokhu kusho nokuthi i-pup yakho kungenzeka ukuthi ibe nengubo ephindwe kabili - ekhipha kaningi kakhulu.
Izinhlobo zokuchitheka okuphansi zenzela izinhlobo ezinhle zomndeni kulabo abanezifo zomzimba noma futhi banezikhathi ezinqunyelwe ezandleni zabo zokuzilungisa; kwenza ukunakekela isilwane kube lula futhi .
Njengenja ephansi, izidingo zabo zokuzilungisa zehlisiwe. Lokhu kusho ukuthi isikhathi esincane esidinga ukusetshenziselwa ukuxubha ijazi lesilwane sakho. Abanikazi abaningi bakhetha njalo uhambo oluya kwabazicoci ngeLabradoodle yabo.
Sisancoma ukuxubha nokususa ijazi lakho le-puppy njalo; mhlawumbe izikhathi ezimbalwa ngesonto?
Baziwa njengabantu abanohlobo oluphakeme kakhulu lomphakathi, banesifiso sokuhlangana nazo zonke izizinda zempilo.
ILabradoodle yaziwa ngokuzwana kabi namanye ama-canine asendlini, kanye nezinye izilwane ezifuywayo (isb. Amakati). Kodwa-ke, ukuzijabulisa akukhawulelwe ekuhlanganyeleni kwenja kuphela noma inja nomuntu.
Eqinisweni, iLabradoodle ithanda ukuzijabulisa ngezindlela eziningi.
I- inqubo 'yokuzijabulisa' umdlwane wakho ubuye uhlanganise ukwethulwa kwezindawo ezintsha, imisindo nezinto.
Ukuxhumana nabantu kuvumela iLabradoodle yakho ukuthi ifunde , qonda futhi uqiniseke ngezimo nezimo ezintsha.
Lesi sici sibenza babe inja enkulu yomndeni okwazi ngokuzethemba ukuthatha konke ukuzidela kwakho okusha.
Uthando lwabo lubenza babe ngabangane abathembekile nabanothando kokubili wena nomndeni wakho.
Izinja zifuna ukuxhumana nabanikazi bazo ngenxa ye-hormone oxytocin. Le hormone idlala indima ebalulekile ekuxhumaneni kwenja yakho nomphakathi. Ucwaningo luphakamisa ukuthi izinja zikhipha le hormone lapho zihlangana nabanikazi bazo.
Le hormone ibuye ikhishwe lapho benganga, bedlala, noma bemane bebuka abaninizo.
ILabradoodle inika izingalo ezimnandi ngenxa yezizathu ezahlukahlukene.
Okokuqala, i-super yabo ijazi eligoqene elithambile kubenza babe abangane abakhulu ngokwedlulele. Ngubani ongathandi i-pooch ethambile kakhulu ukugoqa?
Okwesibili, iLabradoodle iyinhlobo ethandwa kakhulu.
Kuliqiniso ukuthi bayakuthanda ukudlala. Kodwa-ke, bafuna nobusuku obuthule bunga abathandekayo babo.
ILabradoodle yenzela enye yama-doodle amahle kakhulu ngenxa yenjabulo yawo nokudlala kwawo. Ukuziphatha kwabo ngokudlala okwenza lolu hlobo luvelele uma kuziwa ekuzwananeni nezingane.
Ubani ongcono wokugcina inkampani yezingane zakho kunesilwane somndeni esidlalayo?
Isikhathi sokudlala sihlinzeka umdlwane wakho ngezindlela zokukhipha amandla futhi siwasize asondelane nawe namanye amalungu omndeni.
Ukudlala kungaqukatha ukugijima kuzungeze igceke, ukulanda, ukudlala ithoyizi, noma imidlalo yokusebenzisana. ILabradoodle inemikhuba emihle yokubuyisa izinja.
ILabradoodle isilwane esinobungane, esinobungani, esisebenza futhi esidlalayo esilingana ngqo kunoma imuphi umndeni, inqobo nje uma izidingo zabo ezingokwengqondo nezingokomzimba zifezekiswa ngokulinganayo.
Ubuntu babo obubheke kakhulu bubenza babe yinja enkulu yokwelapha kanye nokuganga umngani, futhi ukukhuthazela kwabo kubenza basebenze kanzima futhi babe ngabancela isikhathi sokudlala.
Ngamasayizi ahlukahlukene nemibala ongakhetha kuyo, iLabradoodle iyanda ngokufunwa njengesilwane somndeni.
Ngokubona kwethu iLabradoodle impela iyinhlanganisela yomklami we-doodle futhi siyethemba ukuthi izizathu zethu eziyi-19 ezinhle bezanele ukukukholisa!
Yikuphi okuyintandokazi yakho? Ingabe kukhona esikushiyile ngaphandle?
Umhlahlandlela wakho ophelele ku-Deer Head Chihuahua
I-German Shepherd Wolf Mix Mix Breed Information, Izithombe Nentengo
lab retriever vs ukubuyisa kwegolide
ilebhu ephuzi uhhafu retriever yegolide
likhulu kangakanani imbobo ebomvu yempumulo
kungani inja yami iphakamisa